घनिष्ठ साथी नै छोराको ‘अपहरणकारी’! - Deshko News Deshko News घनिष्ठ साथी नै छोराको ‘अपहरणकारी’! - Deshko News
घनिष्ठ साथी नै छोराको ‘अपहरणकारी’!
विजय चौधरी र राजु विश्वकर्मा कक्षा ४ देखिका साथी हुन्। १४ वर्ष भयो दुवैको घनिष्ठ मित्रताको। काठमाडौंको शान्ति शिक्षा माध्यमिक विलालयमा उनीहरु सँगै पढे। चौधरी हार्डवेयरको ब्यापारमा लागे भने विश्वकर्मा मार्बलसम्बन्धी काम गर्न थाले।
रामेछापका विश्वकर्मा ललितपुर, थसिखेल बस्थे। बुटवलका चौधरी काठमाडौं नयाँ बजार बस्थे। गत विहीबारको घटनापछि दुबैको मित्रता टुंगिएको छ। एक अर्काबीच चौधरी पीडित भएका छन् विश्वकर्मा पीडक। आजको नागरिकमा खबर छ।
गत विहीबार विजयका पाँच वर्षीय छोरा अपहरणमा परे। प्रहरीको दबाबका कारण पाँच दिनपछि विशाल सकुशल मुक्त भए। विजयको घरमा खुसी फर्कियो। तर पनि उनको मन अमिल्लिएको छ। किनकी आफ्ना छोराको अपहरण योजनामा उनै बालसखा विश्वकर्मा संलग्न भएको खुल्यो।